Ogaden News Agency (ONA) – Shirka wadatashiga jaaliyadaha Yurub oo ka furmay wadanka Sweden Magaalada Eskilstuna. oo Maalintii 2aad galay
Shirka wadatashiga jaaliyadaha Yurub oo ka furmay wadanka Sweden Magaalada Eskilstuna. oo Maalintii 2aad galay
Posted by ONA Admin	/ January 7, 2017
Shirkii wada tashiga xubnaha jaaliyadaha ee qaarad Yurub UK mooye oo galay maalintii labaad ayaa wuxuu si habsami ah uga socday hoolkii shirka waxaana la guda galay barnaamijkii shirku uu ku socday qaybtiisii labaad.
Shirka ayaa lagu furay Aayado Qur”aan ah oo soo jeediyay , Sheekh Xasan iyo wacdi diini ah ,kuna xasuusiyay ka soo qaybgala yaasha ,ku xidhnaanta Alle .Kadib waxaa laguda galay dhagaysiga Jaaliyadaha oo ay Jaaliyad waliba soo bandhigtay qorshihii
ay ugu talagashay inay kaga qayb-qaadato.waxaa ugu horayn qorshahoodii soo bandhigtay Jaaliyada Denmark
waxaana umatalayay Jaaliyada inuu ku hadlo Afkeeda Mudane Cumar .Oo runtii kahadlay Hawlo mugwayn oo aragtidheer ku salaysan.
Waxaa sidoo kale soo bandhigay Jaaliyaadka kale ee meesha joogay ,Norway,Finlad ,Swezerland iyo swedan oo ahayd Jaaliyadii Shirka martigalisay Shirkan oo socondoona Maanta ilaa bari waxaa uu ku socdaa Shirar gooni gooni ah group workshop
hadaba waxaan idiin soo gudbun doonaa hadii alle idmo Goaamada iyo Warmurtiyeedka ka soo bixi doona